Umgaqo-nkqubo weMfihlo • I-Strawr Camera Straps
Shipping Lonke • Ikhululekile kwi-US Orders $ 25 +
Ukubuyiselwa kweSuku lwe-30 • IWaranti yoBomi • Yenziwe e-USA
I-M1a ikhamera yekhamera
I-M1w I-Strap Wrist Strap
I-F1-Style Style Strap
I-M1 Series I-Quick-Release Camera Straps
Kuhlaziywa ngokutsha: uJanuwari 13, 2019
Simplr LLC ("us" "," thina ", okanye" yethu ") isebenzela i-Simplr.us (" iSayithi "). Eli phepha likuxelela ngemigaqo-nkqubo malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa kunye nokudalulwa kweenkcukacha zabantu esizifumana kubasebenzisi beSayithi.
Sisebenzisa iLwazi lakho lobuNtu kuphela ukuzalisekisa iilaydi, unxibelelwano kunye nokuphucula iSayithi. Ngokusebenzisa iSayithi, uyavuma ukuqokelela nokusetyenziswa kolwazi ngokuhambelana nalo mgaqo-nkqubo.
Ukuqokelela ulwazi kunye nokusetyenziswa
Ngethuba usebenzisa iSayithi yethu, sinokucela ukuba usibonelele ngolwazi oluthile oluchongiweyo olungasetyenziselwa ukunxibelelana okanye ukukuchonga. Ulwazi oluchongiweyo lomntu lungabandakanya, kodwa alukhawulelwanga egameni lakho ("Iingcaciso Zomntu").
Njengabaqhubi beendawo ezininzi, siqokelela ulwazi olukhutshwe ngumkhangeli wakho xa usityelela iSayithi yethu ("I-Data Log").
Le Datha yeDatha ingabandakanya ulwazi olufana nekhompyutheni ye-intanethi ye-intanethi ("IP"), uhlobo lwesiphequluli, inguqulelo yesiphequluli, iphepha leSayithi oya kulivakashelayo, ixesha kunye nomhla wokutyelela kwakho, ixesha elichithwe kuloo maphepha kunye nezinye manani.
Ukongeza, singasebenzisa iinkonzo zenkampani yesithathu ezifana ne-Google Analytics eqokelela, iliso kwaye ihlalutye le ngcaciso.
Singasebenzisa iNkcukacha zakho zobuqu ukunxibelelana nawe malunga neendlela ezibekiwe, iincwadi zeendaba, ukuthengisa okanye izinto zokuphromotha.
Ikhukhi iifayile kunye nenani elincinane lwedatha, elingabandakanya isihlomelo esingachazwanga. Ikhukhi zithunyelwa kwisiphequluli sakho kwiwebhu kwaye zigcinwe kwi-drive yakho yecomputer.
Njengamaziko amaninzi, sisebenzisa "ikhukhi" ukuqokelela ulwazi. Unokuyalela umkhangeli wakho ukuba unqabe yonke i-cookies okanye ukubonisa xa i-cookie ithunyelwa. Nangona kunjalo, ukuba awuwamukeli ikhukhi, awukwazi ukusebenzisa ezinye iindawo zeSayithi lethu.
Ukhuseleko lweenkcukacha zakho zobuqu lubalulekile kuthi, kodwa khumbula ukuba akukho ndlela yokudlulisela kwi-intanethi, okanye indlela yokugcina i-elektroniki, yi-100% ekhuselekile. Nangona silwela ukusebenzisa iindlela ezamkelekileyo zorhwebo ukukhusela i-Information yakho yoBuntu, asikwazi ukuqinisekisa ukukhuselwa kwayo.
Lo Mgaqo-nkqubo weMfihlo uza kuhlala usebenza ngaphandle kokubhekiselele kuyo nayiphi na inguqu kwimigqaliselo yayo kwixesha elizayo, eliya kusebenza ngokukhawuleza emva kokuba ithunyelwe kule khasi.
Sigcina ilungelo lokuhlaziya okanye ukutshintsha iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo ngasiphi na ixesha kwaye kufuneka uhlolisise le Mgaqo-nkqubo weNgcaciso ngezikhathi ezithile. Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kweNkonzo emva kokuba sithumele nayiphi na iinguqulelo kwiNkcazo Yobumfihlo kule khasi iya kubakho ukuvuma kwakho ukuguqulwa kunye nemvume yakho yokuhlala nokuboshwa nguMgaqo-nkqubo wobumfihlo.
Ukuba unemibuzo malunga nale nkqubo Yobumfihlo, nceda Qhagamshelana nathi.
799 South Street yesithathu
Ukhululekile e-US: 877-603-5078
Ayikho i-junk emails ... kwaye isithembiso. Sithumela kuphela izipapasho zemveliso kunye nezibonelelo ezikhethekileyo ngezihlandlo.
I-Copyright © 2019 Simplr LLC. Onke amalungelo agciniwe. Amaxabiso aboniswe kwi-US $.
Akukho Junk Emails
... kwaye isithembiso. Sithumela kuphela izipapasho zemveliso kunye nezibonelelo ezikhethekileyo ngezihlandlo.
Siza kukuxelela xa ikhona.